Warships को ब्याटलसीपखेल सिम्युलेटर विश्व उहाँको पूर्ववर्ती थियो, खेलाडीहरूलाई सबै पक्षहरूमा मा नजिक वास्तविकता गर्न ट्यांक को मोडेल व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ रूपमा लोकप्रिय छ। तर, यो खेल मा अवस्थित गर्छन् र हरेक दिन थप र थप हुन्छ जो आफ्नो प्रशंसक। र यति त्यहाँ लागि प्रयास गर्न शाखा, केही पंप जो जहाज, प्रयोग गर्न के सबै भन्दा राम्रो छ नयाँ प्रश्नहरू छन्।
यस लेखमा अमेरिकी जहाज को शीर्ष शाखा मध्ये एक छ जो जंगी जहाज "मनटाना", बारे छलफल हुनेछ। धेरै खेलाडीहरूलाई अमेरिकी शाखा पंप यो मोडेल लागि वा छैन सोच गर्दै हुनुहुन्छ? केही यो अभ्यास धेरै राम्रो पानी लडाई मा लडाकूको साबित जो जापानी, मा लिन राम्रो छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर तपाईं हतार गर्न आवश्यक छैन - यो जंगी जहाज "मनटाना" छ कि थप विवरण राम्रो बुझ्न, र तपाईंले पहिले नै निर्णय गर्न सक्षम हुनेछ, यो जहाज प्राप्त गर्न, अमेरिकी शाखा स्विंग, वा तपाईं धेरै रोचक छैन।
त्यसैले, तपाईं के जंगी जहाज "मनटाना" छ बारे जान्नु आवश्यक पहिलो कुरा - यस्तो शरीर, इन्जिन, गियर र यति मा रूपमा यसको घटक तत्व छ। तपाईं हल र यसको प्राविधिक विशेषताहरु सुरु गर्नुपर्छ। ध्यान लायक छ जो पहिलो सूचक, - आफ्नो लड क्षमता, अर्थात्, तपाईं डुबा अघि कि जहाज गुमाउन सक्छ स्वास्थ्य छ। स्वास्थ्य को यो मोडेल मा प्रशस्त - यो तपाईं कुनै पनि परिस्थितिमा एक लामो समय को लागि afloat पछिल्लो सकून्, हजारौं को सयौं एउटा सानो गुमाएको छ। प्रत्येक बन्दूक टाढा भित्र पस्नु गर्न सक्ने पत्र - यो पनि सबैभन्दा कमजोर ठाउँमा हतियार लगभग बीस मिलिमिटरमा लागि स्वास्थ्य को स्टक थपिएको छ। यसलाई जो कहिले काँही मोटाइ मा 409 मिलिमिटरमा पुग्छ मुख्य हतियार बारेमा केही भन्छन्।
टावर्स बन्दुक समायोजित गर्न को लागि रूपमा, तिनीहरूले BattleShips धेरै छन्: तिनीहरूलाई चार, मुख्य कैलिबर बन्दुक लागि हो दस - हावा रक्षा बन्दुक लागि - बोर्ड मा स्थित सहायक र पचास टावर लागि। खेल धेरै जहाज क्रमशः, तपाईं अन्य हतियार के गर्न छ हुनेछ, torpedo ट्यूब torpedoes प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर दुर्भाग्यवश, जंगी जहाज "मनटाना" छैन बोर्ड छ।
आवास सन्दर्भमा अब स्पष्ट छ। यसलाई निम्न घटक जहाज विचार गर्न समय "मनटाना।" Warships अमेरिकी शाखा को ब्याटलसीपखेल विश्व यस्तो hefty edifice सार्न बस आवश्यक छ, तर यो मोबाइल बनाउन पर्याप्त शक्तिशाली छ, जो एक धेरै शक्तिशाली इन्जिन, छ। 172 हजार अश्वशक्ति "मनटाना" पर्याप्त छैन चाहेअनुसार मोड्न र गुणस्तर Maneuvers प्रदर्शन गर्न स्वतन्त्र थियो। ब्याटलसीपखेल आफ्नो पुस्तक र firepower बचाउँछ, तर गतिशीलता, यो सानो छ। पछि सबै प्रति घण्टा मात्र 30 छलछामको गाँठो पनि एक शीर्ष गति। हामी भेष बारेमा के भन्न सक्छौं - यो बस जहाज एकदम दूरी देखि देख्न सकिन्छ त अवस्थित छैन। इन्जिन, पनि सबै आफ्नो शक्ति "मनटाना" को मोडेल को कमीकमजोरी लेखिएको हुनुपर्छ किन कि छ। Warships अमेरिकी शाखा को ब्याटलसीपखेल विश्व यसलाई आफ्नो ट्रम्प कार्ड, कमीकमजोरी लागि क्षतिपूर्ति जो छ, भने गरिएको छ रूपमा, धेरै भद्दा छ, तर। पुस्तक बारे पहिले नै धेरै भन्नुभयो गरिएको छ। यसको बारेमा र firepower कुरा गर्न समय।
मुख्य आगोको बन्दुक
लेखको धेरै सुरुमा पहिले नै अमेरिकी शाखा अक्सर इन्टरनेट वरिपरि त्यहाँ बारेमा चर्चा गर्दै त, जापानी तुलना गरिएको छ कि उल्लेख गरिएको छ के राम्रो यी शाखा मा उच्च अन्त वाहन को प्रकारको। ब्याटलसीपखेल "मनटाना" पद "सुपर Yamato" अक्सर जित्छ। अब तपाईंलाई थाहा किन firepower "मनटाना" राम्रो खेलाडी को बहुमत प्रशंसा जो "Yamato", पार गर्न सक्छ। त्यसैले, बोर्ड मा मुख्य कैलिबर बन्दुक बाह्र टुक्राहरू - तीन चार टावर प्रत्येक लागि। प्रति मिनेट मात्र दुई शट गर्दा तेर्सो एक 180 डिग्री पालो मा 45 सेकेन्ड को कुल को लागि, प्रति सेकेन्ड4डिग्री को निर्देशन को गति - आफ्नो दर छैन पनि उच्च छ। तर यो साधन को नै गोलीबारी दायरा छैन सय तीन मिटर भन्दा बढि को गोले अधिकतम अपव्यय संग लगभग 24 किलोमिटर छ। मुख्य कैलिबर बन्दुक रूपमा उच्च विस्फोटक र हतियार-भेदी projectiles गोली गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो 13.500 एकाइहरु बिगार्न लागू हुँदा पहिलो कारण क्षति एकाइहरु 5700 र, एक जहाज प्रतिद्वन्द्वीको मा आगो को 36 प्रतिशत मौका अनुमति, तर तिनीहरूले बाक्लो हतियार तह तोडने सट्टा आन्तरिक प्रणाली जलाएर प्रत्यक्ष क्षति लागू लागि विशेष डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। यी उपकरण र प्रसिद्ध जंगी जहाज "मनटाना।" जहाज मा हाइड, तथापि, मात्र होइन विचार को लागि मुख्य कैलिबर बन्दुक पनि सहायक गेज छ वर्णन गरिएको छ।
कैलिबर बन्दूक सहायक
अक्सर ठीक मुख्य बन्दूक ध्यान पम्पिंग मा जंगी जहाज "मनटाना" हाइड कुरा गर्दा, तर एकै समयमा तपाईं अझै पनि मात्र तिनीहरूलाई तपाईंले युद्धमा जीत गर्न सक्षम छैन भन्ने बिर्सनु हुँदैन। तपाईं परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नो बोर्ड मा हो सबै बन्दुक संयोजन गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसैले दोस्रो रूपमा डिजाइन छन् ती साधन ध्यान। तिनीहरूले बोर्ड सबै बीस थिए - तिनीहरूलाई लागि छुट्याइएको दस टावर प्रत्येक मा बैरल दुई। तिनीहरूले आधार भन्दा धेरै कमजोर छन् - आफ्नो आकार आगो लगभग चार पटक सानो दायरा तिनीहरूलाई मात्र चार्ज मात्र छ किलोमिटर छ उच्च विस्फोटक गोले, संग क्षति अधिकतम 1800 अंक सम्पर्क मा लागू गरियो जुन। पनि झर्ने देखि आगोको जोखिम मात्र नौ प्रतिशत छ। तर यी बन्दुक को फाइदा आगो को आफ्नो उच्च दर छ - तिनीहरूलाई रिचार्जिंग बारेमा मात्र चार सेकेन्ड लाग्छ, त्यसैले एक मिनेट प्रत्येक बैरल देखि पन्ध्र शट सम्म उत्पादन गर्न सक्छन्। कारण यी बन्दुक जंगी जहाज प्रकार गर्न "मनटाना" Melee अविश्वसनीय formidable प्रतिद्वन्द्वीको हुन सक्छ।
स्वाभाविक, हाइड जंगी जहाज "मनटाना", यो असम्भव विरोधी विमान बन्दुक, प्रशस्त पाइन्छन् जो उल्लेख बिना बनाउनु हो। यसलाई पहिले नै बोर्ड मार्फत त्यहाँ पचास टावर छ कि उल्लेख गरिएको, र तिनीहरूलाई प्रत्येक केवल एक बन्दूक फेला छ। कुल, जो को त्यहाँ 160 टुक्रा, विमान जहाज दृष्टिकोण छैन राम्रो छ भनेर हो। पहिलो बीस टावर 40-मिमी बन्दुक, प्रत्येक टावर लागि चार टुक्रा संग सुसज्जित छन्। यी जो हावा रक्षा को कुल संख्या आधा बनाउन मुख्य विरोधी विमान बन्दुक, हो "मनटाना।" आफ्नो आगो को सीमा 3.5 किलोमिटर टाढा छ, र DPS - 317 एकाइहरु।
हावा रक्षा बन्दुक अन्य तीन प्रकारको रूपमा, तिनीहरूलाई दुई 20-मिमी हो: दुई गोली मार दुई किलोमिटर, तर एक प्रति सेकेन्ड 72 क्षति सम्झौता गर्न सक्छन्, जबकि अन्य - 121 एकाइ क्षति। ठीक छ, अन्तिम विरोधी विमान बन्दुक उच्च कैलिबर, 127 मिमी छ - यी जहाजहरू संग टकराव मा एक सहायता रूपमा प्रयोग गरिन्छ समान उपकरण हो। पाँच भन्दा बढी किलोमिटर - DPS तिनीहरूलाई 157 एकाइहरु, र गोलीबारी दायरा छ।
कि जंगी जहाज संग सुसज्जित छ जसले सबै हतियार, छ "मनटाना।" गाइड र समीक्षा वा कि प्रकारको थप ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, तर यो तपाईं पनि बलियो विरोधीहरूले जीत मौका दिनेछु सबै प्रकार को प्रयोग को एक योग्य संयोजन छ।
यो साँच्चै भन्दा खेल मा शक्तिशाली को छ रूपमा, तर केवल सही हात मा ब्याटलसीपखेल "मनटाना" खेल "Varships दुनिया" मा, हुन सक्छ धेरै खेलाडीहरूलाई डर। त्यसैले के उपकरण हो जो पुस्तक, र यति मा सामना गर्न केवल पर्याप्त। कमीकमजोरी गर्न - यो जहाज merits, र त्यो के श्रेय गर्न सकिन्छ बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। भविष्यमा, तपाईं आफ्नो मोडेल को मुख्य लाभ को प्रभावकारी प्रयोगमा काम गर्न, साथै शत्रु अघि कमीकमजोरी लुकाउन सिक्न र न्यूनतम आफ्नो तल्लो आफ्नो आफ्नो जहाज मा प्रभाव लागि क्षतिपूर्ति गर्न प्रयास गर्न आवश्यक हुनेछ। तर तपाईं ध्यान पहिलो स्थानमा आवश्यक हुनेछ जो मा जंगी जहाज को मुख्य लाभ के हुन्?
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा - यो मुख्य आगोको चड्डी छ। तिनीहरूले धेरै शक्तिशाली छन् र उच्च गोलीबारी दायरा छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईं तिनीहरूलाई धेरै राम्रो के अभूतपूर्व firepower सिर्जना गर्न संयोजन छ। तपाईंले सही प्रयोग गर्न सिक्न भने, त्यसपछि आफ्नो विरोधीको बस तपाईं को सामने खडा गर्न सक्षम हुने छैन।
एउटै डाटा सम्बन्धित जो दोस्रो फाइदा, फेरि तेर्सो अक्ष परिक्रमा को दर लागू। प्रति सेकेन्ड चार डिग्री - यो जो तपाईंलाई द्रुत युद्धभूमिमा भइरहेको छ के प्रतिक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ एक प्रभावशाली परिणाम छ। तपाईं प्रभावकारी जसबाट आफ्नो वाहन को समग्र ढिला सुस्ती उजुरी गर्नुस् offsetting, विभिन्न निर्देशनहरू मा शूटिंग सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछ।
र को पाठ्यक्रम, यो रक्षा गर्न ध्यान छैन असंभव छ: हात मा 160 विरोधी विमान बन्दुक भइरहेको, तपाईं हावा पूर्ण नियन्त्रण छ। र यदि तपाईं एक विशिष्ट तुलना खर्च - जंगी जहाज को "Yamato" विरुद्ध "मनटाना" - यहाँ सबै कुरा स्पष्ट छ। को "मनटाना" antiaircraft बल धेरै पटक, खेल मा कुनै पनि अन्य जहाज को "Yamato" संग तुलना मा सहित को भन्दा उच्च छ।
तर जहाज यस्तो merits यो आदर्श छ संग, अन्यथा त्यहाँ चयन र यति मा मुद्दा को कस्तो सबै भन्दा राम्रो कुन मोडेल निरन्तर छलफलहरू, भनेर सोच्न छैन। स्वाभाविक, को "मनटाना" तपाईं पनि ध्यान गर्नुपर्छ भनेर कमीकमजोरी छन्। तपाईं बस तिनीहरूलाई तपाईंको आँखा बन्द गर्न प्रयास भने, तपाईं कडुवाहट यसको लागि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो युद्धमा शत्रु देखि लुकाउन गर्न सक्षम हुन कि मर्यादा भन्दा तिनीहरूलाई कुनै कम विवरण अध्ययन गर्न धेरै समझदार छ। जब तपाईं आफ्नो कमजोर स्थान थाहा छ, तपाईं सधैं धेरै सजिलो ढाक्न।
यो जहाज को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण drawback यसलाई पूर्ण कमी कुनै पनि भेष छ। आफ्नो जंगी जहाज एकै नजरमा सबै विरोधीको, र यसरी यो विरोधीहरूले को भाग मा ध्यान धेरै आकर्षित गर्छ। अन्य जहाज फिर्ता प्रहार गर्न शत्रु देखि लुकाउन प्रयास सक्छ भने, तपाईं सधैं मात्र frontal लडाई, को प्रतिद्वन्द्वीको गुणस्तर मात्रा मा एक उच्च र कहिले काँही संग सामान्यतया राख्न छन्।
गरिब गतिशीलता र maneuverability - यहाँ अर्को धेरै ठूलो बेफाइदा प्रकट गरिएको छ। बस राख्नु, तपाईं राम्रो बाहिर किनभने तपाईंको जहाज उहाँले पनि ढिलो torpedoes चकमा सक्दैन त्यसैले भद्दा छ, यसको भाग्य र बाक्लो हतियार र गर्न आक्रमण गर्न सुरक्षा दिन लडाई Maneuvers पूरा गर्न, जहाज को व्यवस्थापन बारे बिर्सन्छन्।
र अन्त मा यो मूल्य पनि सहायक कैलिबर बन्दुक, जो आगो को प्रभावशाली दायरा टिप्पण छ। तिनीहरूले घनिष्ठ लडाई लागि पूर्ण उपयुक्त हो, छ, तर यो कसैले पर्याप्त बन्द भएको जंगी जहाज गर्न पौडी खेल्न dares जो एक स्थिति कल्पना गर्न अति दुर्लभ छ।
तपाईं जहाज सुधार छ स्लट छ कुल, र तपाईं जंगी जहाज "मनटाना" को लागि प्ले गर्ने निर्णय भने, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो आवश्यकता फिट केही सुधार छन्। सबै को पहिलो तपाईं "मुख्य हतियार" भनिन्छ आधुनिकीकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उनको धन्यवाद, तपाईं मुख्य आगो आफ्नो बन्दुक मा अवस्थित छ जो टावर, को जाँगरको बढाउन सक्छ।
रक्षा - दोस्रो स्लट लागि जाँदा, त्यसपछि यहाँ तपाईं निश्चित आफ्नो मुख्य firepower सुधार गर्नुपर्छ। यो बीस प्रतिशत आफ्नो विरोधी विमान हतियार को प्रभावकारी दायरा बढ्छ छ, र यसको क्षमता सुधार गर्छ।
यहाँ तपाईं एक विशेष युद्धमा लागि सबै भन्दा राम्रो मिल्दो के चयन गर्न सक्नुहुन्छ। को प्रतिद्वन्द्वीको अक्सर विमान प्रयोग भने, तपाईंले आफ्नो विरोधी विमान प्रतिष्ठानहरु सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक वैकल्पिक रूपमा, तपाईँले मुख्य ब्याट्री को आफ्नो साधन को शुद्धता वृद्धि हुनेछ जो अपग्रेड "केन्द्रीय तोप पोस्ट", प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
चौथो स्लट मा सामान्यतया स्थापना गर्न आवश्यक छ "प्रणाली क्षति नियन्त्रण।" आफ्नो गतिशीलता र maneuverability गरिब छ भनेर मनमा असर, को जंगी जहाज लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार - यो अस्तित्व को आफ्नो संभावना वृद्धि हुनेछ।
पाँचौ स्लट लागि जाँदा, फेरि त्यहाँ, तपाईं एक छनोट युद्धभूमिमा अवस्थाको, एक विशेष युद्धमा छन् के आधारमा बनाउन सक्छ। पहिलो विकल्प -, आगो र बाढी को likelihood कम साथै यस्तो अवस्थामा को उन्मूलन को दर वृद्धि, गर्न "पंप" जहाज को अस्तित्व जारी। सानो आफ्नो चपलता सुधार हुनेछ एक परिमार्जन - तर तपाईं पनि "मिसिन को स्टीयरिंग" ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ।
खैर, अन्तमा, तपाईं "पत्ता लगाउने प्रणाली" आफ्नो वाहन दृश्यात्मकता सुधार हुनेछ भन्ने स्थापना गर्न आवश्यक छ। यो चाँडै पत्ता लगाउन र शत्रु जहाज हटाउन आवश्यक छ।
चूल्हा मा बाँध्न लागि पुरस्कार। अवलोकन बाँध्न
प्रभावकारी व्यञ्जनहरु: Kraft "Maynkraft" को रूपमा
Issushitelya "Maynkraft" मा कल गर्न कसरी र किन यो के?
हाइड: जेड (परभक्षी को लिग)
मार्गदर्शन: "Maynkraft" को रूपमा प्लगइन स्थापना गर्न।
साना लागि कम्प्युटर गेम। बच्चाहरु को लागि कम्प्यूटर खेल
एक ठूलो परिवारको लागि कार: फोर्ड सी-अधिकतम
आफ्नो हात संग ओछ्यानमा टाउको
सुरक्षा उपकरण वृद्धि arresters: आवेदन जडान रेखाचित्र काम सिद्धान्त
"सिपल color Katun" - मनोरञ्जन, आकर्षण
बेलारुसी राज्य शैक्षिक संगीत थिएटर: को थिएटर मुग्ध पार्ने संगीतको, कम्पनी, ठेगाना,
छत moldings लागि adhesive: प्रजाति
ग्यास चुलो बोर्ड: संकुचित र व्यावहारिक
जलजीवालय बिरुवाहरु, प्रकार र हेरविचार
"वित्त र क्रेडिट": समीक्षा र समस्या
राज्य र कानून। आरएफ सीसी कला। 153 टिप्पणीहरूसँग